Nagarik Shukrabar - रामकुमारीको ‘ड्रिम बुक’
आइतबार, १३ फागुन २०७४, ०१ : १२ | प्रजु पन्त
सिंहदरबार हाताभित्र एक्कासि धुवाँ देखियो । प्रहरी धुवाँ आएतिर दौडिए । मुस्लो निस्कनुको कारण थियो ‘नागरिकता विधेयक २०५६’ जलाउनु । एकै छिनमा नारा लाग्यो ‘राष्ट्रघाती नागरिकता ऐन खारेज गर’ । यसको अग्रपङ्क्तिमा थिइन् रामकुमारी झाँक्री ।
यो बीचमा धेरै आरोहअवरोह पार गरिन् रामकुमारीले । दोस्रो जनआन्दोलनमा सडकको मोर्चा सम्हालिन् । अखिलको अध्यक्ष भइन् । उनका समकक्षी नेता सांसद हुँदै मन्त्रीसमेत भइसके । तर उनको संसदको यात्रा बल्ल सुरु भयो ‘समानुपातिक सांसद’को रूपमा ।
गुल्मीको विकट गाउँमा जन्मिएकी रामकुमारी स्कुल तहदेखि नै हक्की स्वभावकी थिइन् । आफ्ना कुरा भन्न उनलाई डर लाग्दैनथ्यो । ४ दिदीबहिनी र ३ दाजुभाइबीच हुर्किएकी रामकुमारी १२ वर्षको उमेरमै राजनीतिमा होमिएकी थिइन् रे ।
‘म सानै थिएँ । साहुहरुले गरिबलाई सयकडा ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लगाउँथे, उपल्लो जात भनिएकाले तल्लो जातका भनेर छुट्टाइएकालाई पधेँरो छुन दिँदैनथेँ,’ राजनीतिमा होमिनुको कारण खोल्दै उनले भनिन्, ‘राजनीतिमा लाग्यो भने यो सबै हटाउन सकिन्छ ।’
पद्यकन्याको त्यो भाषण
०५० मा एसएलसी उत्तीर्ण भएपछि उनी काठमाडौं आइन् । उनकी दिदीले उनलाई पढाइ सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै क्याम्पस देखाउन लगिन् बागबजार ।
पद्यकन्या क्याम्पसको गेटबाट छिरेदेखि नै उनी दंगै । ठूला भवन । विद्यार्थीहरु कोही खाना बनाउने, कोही सिलाइबुनाइ, कोही म्युजिकमा झुमेका, कोही गीत गाइरहेका, नाचिरहेका थिए ।
उनलाई अचम्म बनाउने अर्को पाटो थियो क्याम्पसभरि केटी नै केटी । पढ्ने पनि केटी, पढाउने पनि केटी । उनी छक्कै परिछिन् पहिलो दिन ।
उनले पद्यकन्या रोजेपछि पढाइको यात्रा सुरु भयो त्यहीँबाट । जिल्लामा अनेरास्ववियुको जिल्ला तहमा बसेर काम गरिसकेकी उनी भाषण भनेपछि हुरुक्कै हुन्थिन् । कतै कसैले राजनीतिक भाषण ग¥यो कि कान ठाडा भइहाल्ने । उनलाई भाषणले तानिहाल्थ्यो । राजनीतिको नशा लागिसकेको उनलाई कलेजमा कहिले कार्यक्रम होला र बोल्न पाइएला भन्ने लागिरहन्थ्यो ।
अखिलले ०५१, मंसिर २९ मा नयाँ विद्यार्थीलाई स्वागत गर्न कार्यक्रम राख्यो । त्यसमा बोल्न चाहनेको नाम खोजियो । अरूले हात नउठाएपछि रामकुमारी आफैंले हात उठाइन् ।
बोल्ने भनेर नाम त लेखाइन् त र के बोल्ने । उनी कोठामा आएलगत्तै दाइसँग के–के बोल्ने भनेर सोधिन् । दाइले सिकाएअनुसार भाषणको अभ्यास गरिन् । त्यही अनुसार कलेजमा भाषण गरिन् । त्यो भाषणले उनलाई कलेजमा सबैमाझ चर्चित बनायो । पद्यकन्या क्याम्पसको इकाइ सदस्यदेखि अध्यक्षसम्म हुनुको जग त्यही थियो ।
जब गणतन्त्रको नारा गुञ्जियो
०६३ को आन्दोलनबारे लेखिएको सायदै कुनै किताब होला जहाँ रामकुमारीको नाम छुटेको होस् । उनी सधँै आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा रहिन् । कांग्रेसको तर्फबाट गगन थापाले विद्यार्थीको मोर्चा सम्हालेका थिए । अखिलतिर रामकुमारीले ।
पार्टीले गणतन्त्रबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै रामकुमारी लगायतकाहरु गणतन्त्र जिन्दावाद भन्न थालिसकेका थिए । त्यही आन्दोलनमा टाउको फुटेको उनको तस्बिर अहिले पनि गणतन्त्र ल्याउन युवा नेताले दिएको बलिदानीको प्रतिबिम्ब बनेको छ ।
‘आन्दोलनमा लाग्दा प्रहरीको लाठी कति खाइयो, कहिल्यै गनिएन,’ आन्दोलनकाल सम्झँदै उनले भनिन्, ‘शरीरभरि निलडाम हुन्थ्यो ।’
बल्ल बल्ल सांसद
०६४ मा पार्टीले उनको नाम संविधानसभाको समानुपातिक सूचीमा राखेको थियो । उनलाई चित्त बुझेन यो । उनले हुन्न भनिन् र समानुपातिक सूचीमा बसिनन् । ०६५ मा उनी अखिलको अध्यक्ष भइन् ।
उनी २ वर्ष अखिलमा बसिन् । ०७१ सम्म उनी भूमिकाविहीन भइन् । ०७० मा उनी सांसद बन्न चाहन्थिन् । तर उनको चाहना पूरा भएन । पार्टीको न प्रत्यक्षतर्फ न समानुपातिक कतै अटिनन् उनी ।
‘०६४ सालमा त मैले नै बस्दिन भनेकी थिएँ । तर ०७० मा नेतृत्वले विवेक र नियतबस मलाई राखेन’ उनले चित्त दुखाउँदै भनिन् ।
उनी २०७४ मा आएर बल्ल माननीय भएकी छिन् तर समानुपातिक कोटाबाट । के रामकुमारीमा त्यति आत्मविश्वास रहेन चुनाव जित्ने र समानुपातिकमा बसेको ? शुक्रबारकर्मीको जिज्ञासामा उनले ‘अरूले कुरा नबुझेको’ तर्क गरिन् ।
‘प्रत्यक्षमा लड्न आत्मविश्वास नभएर समानुपातिकमा बसेको होइन,’ उनले भनिन््, ‘समावेशी बनाउन आएको समानुपातिक प्रणालीमा राजनीतिसँग कुनै सम्बन्ध नभएको होइन, राजनीतिमा सक्रिय रहेका नै आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।’
संसदको यात्रा सुरु भएसँगै अब रामकुमारीको मन्त्रीको यात्रा सुरु होला कि नहोला ? एकातिर पार्टीभित्रको चरम गुट, अर्कोतिर माओवादी केन्द्रसँगको पार्टी एकताको अभियान । दुवैले तत्काल मन्त्रीको रूपमा उनको यात्रा सुरु हुने सम्भावना देखिन्न । रामकुमारी पनि निश्चित देखिइनन् यसमा ।
‘कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने मसँग पनि ड्रिम बुक छ,’ उनले भनिन्, ‘तर म अरू जसरी माग्दै हिँड्दिन । जिम्मेवारी आए भाग्दिन